တေး ရေး မင်း ကို က ကစ် ကစ် ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး အ ခြေ အ နေ ပို ဆိုး လာ တဲ့ အ ကြောင်း ပြော - Real Gaming Myanmar
တေး ရေး မင်း ကို က ကစ် ကစ် ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး အ ခြေ အ နေ ပို ဆိုး လာ တဲ့ အ ကြောင်း ပြော
ရ ရှိ လာ တဲ့ လူ့ ဘ ဝ ကြီး မှာ ကံ အ ကြောင်း တ ရား ကြောင့် တစ် ယောက် တည်း ဘ ဝ ကို ကြိုး စား ဖြတ် သန်း နေ ရ တဲ့ ဟာ သ သ ရုပ် ဆောင် ကစ် ကစ် က တော့ ဆီး ချို ရော ဂါ ကြောင့် ကျောက် ကပ် ပျက် စီး လု နီး ပါး ဝေ ဒ နာ တွေ ကို ခံ စား နေ ရ တာ ပါ ။
တ လော က ပဲ အ ခြေ အ နေ တည် ငြိမ် နေ ပြီ လို့ ပ ရိ သတ် တွေ ထင် ထား ကြ တဲ့ က စ် ကစ် ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး က တော့ အ ခု လက် ရှိ မှာ ပို ပို ဆိုး လာ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် ။
အ ဆို ပါ အ ကြောင်း အ ရာ တွေ ကို တော့ ကစ် ကစ် ကို ကူ ညီ နေ တဲ့ တေး ရေး မင်း ကို က သူ့ ရဲ့ လူ မှု ကွန် ယက် မှာ ရင် ဖွင့် ပြီး ပ ရိ သတ် တွေ ကို အ ကူ အ ညီ တောင်း ပေး ထား တာ ပါ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ချစ် ပ ရိ သတ် တွေ အ တွက် အ ခု လက် ရှိ ကစ် ကစ် ခံ စား နေ ရ တဲ့ ရော ဂါ ဝေ ဒ နာ တွေ နဲ့ အ ခက် အ ခဲ တွေ အ ကြောင်း ကို ပြော လာ တဲ့ ကစ် ကစ် ရဲ့ အ ကြောင်း ကို ဖော် ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် ။
တေး ရေး မင်း ကို က တော့ “ အ ခြေ နေ ပို ပို ဆိုး လာ တဲ့ ဟာ သ သ ရုပ် ဆောင် မ ကစ် ကစ် ရဲ့ လက် ရှိ အ ခြေ အ နေ ဝိုင်း ဝန်း ကူ ညီ ပေး ကြ ပါ ဦး။
ကျွန် တော် လည်း အ ပတ် စဉ် အ ခ မဲ့ ဆေး ကု ခ ရီး စဉ် လေး တွေ ထွက် နေ ရ တာ မို့ မ ကစ် ကစ် ဆီ မ ရောက် ဖြစ် ဘူး။
တ နေ့ က တော့ ကျွန် တော် တို့ အ ဖွဲ့ တွေ ဒေါက် တာ အောင် ကို မြင့် နဲ့ အ တူ သွား ကြည့် ပေး ခဲ့ ကြ တယ် ။
အ ပတ် စဉ် တ ပတ် ကိုနှစ် ကြိမ် ကျောက် ကပ် ဆေး နေ ရာ မှ တ ပတ် ကို သုံး ကြိမ် ကျောက် ကပ် ဆေး လာ ရ တာနှစ် လ နီး ပါး ရှိ ပြီ ဖြစ် ပြီး တ နေ့ ကို အောက် စီ ဂျင် ငါး လုံး ပေး နေ ရ တာ က သုံး လ ရှိ နေ ပါ ပြီ ။
ညီ မ လေး ခင် သ ဇင် က လ စဉ် ကျောက် ကပ် ဆေး ပေး မယ့် အ လှူ ရှင် ရှာ ထား ပေး ပေ မယ့် စား ဝတ် နေ ရေး အ တွက် ခက် ခဲ လျက် ရှိ နေ ပါ တယ် ။
မျက် စိ တ ဖက် က လည်း တ ဖြည်း ဖြည်း ကွယ် လာ ပြီ ဖြစ် လို့ အစ် မ ကို မျက် စိ ကု ပေး မယ့် အ လှူ ရှင် လေး ရှာ ပေး ပါ မောင် လေး ရယ် လို့ ရင် ဖွင့် လာ ပါ တယ် ။
ပြီး တော့ ရှမ်း ပြည် က ဆေး ကု အ စွမ်း ထက် တဲ့ ဆ ရာ တော် တ ပါး ဆီ ပို ပေး ဖို့ တောင်း ဆို နေ တာ ကို လက် ရှိ ကျန်း မာ ရေး အ ခြေ အ နေ အ ရ အ မြဲ လို လို အ မော ဖောက် လျက် ရှိ နေ တာ မို့လမ်း ခ ရီး မှာ တ ခု ခု ဖြစ် မှာ စိုး လို့ ပို့ ပေး ဖို့ ကို မ ဝံ့ မ ရဲ ဖြစ် မိ ပါ တယ် ။
အ ရေး ပေါ် အ သည်း အ သန် ဖြစ် ပြီ ဆို က တည်း က ကျောက် ကပ် လဲ ပေး ဖို့ ထိ ကျွန် တော် စီ စဉ် ထား ခဲ့ ပါ တယ်။
ကျောက် ကပ် အ လှူ ရှင် စာ ရင်း ကျွန် တော့် မှာ များ စွာ ရှိ ပြီး ကျောက် ကပ် လဲ မယ့် ကုန် ကျ စ ရိတ် ကို တာ ဝန် ယူ ပေး မယ့် သူ ဌေး တွေ က လည်း ရှိ ပါ တယ် ။
ဒါ ပေ မယ့် အ ခြေ နေ က ပို ပို ဆိုး လာ နေ တာ မို့ အ ကောင် ထည် မ ဖော် ပေး နိုင် ခဲ့ ပါ ဘူး ။
ကျွန် တော့် ထံ အား ကိုး တ ကြီး ရင် ဖွင့် တတ် တာ မို့ အ ခု လည်း ရှမ်း ပြည် က ဘုန်း ကြီး ဆီ ပို့ ပေး ဖို့ တောင်း ဆို နေ တာ ကို ပို့ပေး သင့် မ ပို့ပေး သင့် ဝိုင်း ဝန်း အ ကြံ ပေး ကြ ပါ ဦး ခင် ဗျ ။
လူ နာ တ ယောက် ရဲ့ ဆန္ဒ ကို လိုက် လျော ပေး ရ မှာ လား ဆို တာ ချီ တုံ ချ တုံ ဖြစ် မိ ပါ တယ် ။
စား ဝတ် နေ ရေး ခက် ခဲ နေ တဲ့ မ ကစ် ကစ် ကို လှူ ဒါန်း လို ပါ က မ ကစ် ကစ် ဖုန်း09799894 140 ကို ဖုန်း ဆက် ပြီး လှူ ဒါန်း နိုင် ပါ တယ် ခင် ဗျ ။
ဒီ နေ့ ကျောက် ကပ် ဆေး ဖို့ အ တွက် ငွေ ကြေး အ ခက် ခဲ ရှိ နေ တယ် လို့ လည်း လှမ်း ပြော ပါ တယ် ။
ကျွန် တော် က ကျန်း မာ ရေး စောင့် ရှောက် မှု နဲ့ ကယ် ဆယ် ရေး တွေ မ ရောက် ခဲ့ တဲ့ ရေ ဘေး သင့် မွန် ပြည် နယ် အ တ္ထ ရံ မြစ် ဘေး က ရွာ လေး တွေ မှာ အ ခ မဲ့ ဆေး လိုက် ကု ပေး နေ တာ မို့ မ ကစ် ကစ် ကို ဝိုင်း ဝန်း ကူ ညီ ပေး ကြ ပါ ဦး ခင် ဗျ ။
တေး ရေး မင်း ကို ( ခ ) မင်း ခေတ် မင်း အနု ပ ညာ သစ် ပြ တိုက် ဖောင် ဒေး ရှင်း7.9.20 19″ ဆို ပြီး ကစ် ကစ် ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး အ တွက် ပ ရိ သတ် တွေ ဆီ က အ ကူ အ ညီ တောင်း ခဲ့ တာ ပါ ။
ချစ် ပ ရိ သတ် တွေ လည်း သ ရုပ် ဆောင် ကစ် ကစ် တစ် ယောက် သေ သေ ချာ ချာ ကူ ညီ ပေး နိုင် တဲ့ အ လှူ ရှင် နဲ့ တွေ့ ပြီး ကျန်း မာ ရေး အ ခြေ အ နေ ကောင်း မွန် လာ ပါ စေ လို့ ဆု တောင်း ပေး ခဲ့ ကြ ပါ ဦး နော် ။
Previous: သား တွေ ရဲ့ အ မှန် တ ရား ကို တ ရား ရုံး မှာ အ ကုန် ချ ပြ မည် ဟု W i sdo m H i l l မူ ကြို ကျောင်း ကြီး ကြပ် ရေး မှူး ဒေါ် ဥ မ္မာ လှိုင် က ပြော
Next: ပ ညာ ရေး ဝန် ကြီး ဌာ န က နှစ် ပေါင်း ၃ ၀ ကျော် ခွင့် ရက် မ ပျက် ခဲ့ သူ အ လယ် တန်း ပြ ဆ ရာ မ ငါး ဦး အား မှတ် တမ်း တင် ဂုဏ် ပြု လွှာ နှင့် ဆု ငွေ များ ချီး မြှင့် ပေး အပ်